Ny tontolo iainana any Aostralia | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny tontolo iainana any Aostralia
Louis Martinez | | Nohavaozina tamin'ny 19/03/2021 22:24 | Aostralia
Ny tontolo iainana any Aostralia dia tena samihafa sy manankarena tokoa. Ataovy ao an-tsaina fa firenena goavambe no resahintsika efa ho valo tapitrisa kilaometatra toradroa, mihoatra ny dimy ambin'ny folo heny mahery noho i Espana. Raha ny marina dia izy no fahenina lehibe indrindra manerantany.
Noho io antony io, ny firesahana ny tontolo iainana any Aostralia dia ny firesahana fahasamihafana lehibe, karazana zavamaniry manan-danja ary, ambonin'izany rehetra izany, ny biby manana biby tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ity faritany mahafinaritra ity ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1 Manao ahoana ny tontolo iainana any Aostralia?
1.1 Ny tontolo iainana any Aostralia: flora
1.2 Ny sakana lehibe amin'ny haran-dranomasina
1.3 Ny tontolo iainana any Aostralia: biby
1.3.1 Ny kangaroo sy ny marsupial hafa
1.3.2 Ny dingo na amboadia aostralianina
1.3.3 Ny monotremes, ny platypus tsy mampino
1.3.4 Ny dugong
1.3.6 Ilay emu
1.3.7 Ireo bibilava
Manao ahoana ny tontolo iainana any Aostralia?
Na eo aza ny zava-drehetra, betsaka amin'ny Aostralia dia maina sy maina io. Na izany aza, misy fahasamihafana isan-karazany fonenana izay miainga avy ala tropikaly ny Heaths karazana alpine ary ireo dia vokatry ny karazana toetr'andro samy hafa.
Izany rehetra izany miaraka amin'ny fitokanana laika ny faritaniny, dia nanjary ampahany lehibe amin'ny zavamaniry sy ny biby ao aminy tsy fahita hatraiza hatraiza. Araka ny fantatrao, ity fotokevitra ity dia midika fa ao amin'io faritra io izy ireo, saingy tsy misy toerana hafa eto amin'izao tontolo izao. Raha ny tena manokana, mihoatra ny valopolo isanjaton'ny zavamaniry sy biby mampinono azy ireo. Ho an'ireo trondro amoron-dranomasina antonony, ny isan'ny endemism dia avo hatrany amin'ny XNUMX isan-jato, ary ny XNUMX isan-jaton'ny voron'izy ireo dia hita ihany koa ao Aostralia. Noho izany, tsy mila adim-potoana intsony izahay, hiresaka aminao momba izany flora izany izahay, ary indrindra fa io biby io satria ity farany ity dia liana be.
Ny tontolo iainana any Aostralia: flora
Zava-dehibe sy mampiavaka azy tokoa ny zavamaniry ao amin'ny firenena mandrafitra azy iray manontolo fanjakana voninkazo, antokom-pinoana misy ny faritany lehibe eto amin'ny planetantsika izay misy zavamaniry iraisana.
Araka ny RL Spetch, Profesora Botany ao amin'ny Oniversiten'i Queensland, ny faritr'i Aostralia dia mizara ho ala mandala tropikaly, eucalyptus ary ala akasia, savanna, steppes ary maquia. Ity farany dia noforonina tamin'ny karazan-kazo maharitra ela.
Anisan'ireo zavamaniry rehetra ireo ilay antsoina hoe Ala mando any Gondwana, nanambara Lova eran-tany nataon'i UNESCO. Izy io dia faritra midadasika manodidina ny efatra arivo kilaometatra toradroa eo anelanelan'ny Victoria sy Queensland izay fonenan'ny hazo fahagola maro. Tsy ny faritra ao Aostralia irery no manana an'io anaram-boninahitra io. Ary koa ny Nosy fraser dia World Heritage Site avy amin'i ireo pines kaurís goavambe sy ireo fernistra taloha. Ary toy izany koa no azo ilazana ireo antso Blue Mountains, miorina ao New South Wales, miaraka amin'ireo valan-javaboary valo sy ireo vatolampy kanto mahatalanjona ao amin'ny Caves Jenolan.
Ny sakana lehibe amin'ny haran-dranomasina
Na dia tsy misy ifandraisany amin'ny zavamaniry na zavamaniry aza ity fahagagana hafa ity, dia zava-dehibe ny hilazanay anao izany amin'ny lahatsoratra natokana hiresahana ny tontolo iainana any Aostralia.
Ny haran-dranomasina lehibe indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny halavany mihoatra ny roa arivo kilometatra sy ny sakany lehibe indrindra amin'ny telonjato, ary mamakivaky ny faritra tsara amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny firenena izay manome nosy maro. Any atsinanan'i Queensland no misy azy, ao amin'ilay antsoina hoe marina ranomasina haran-dranomasina.
Na dia nantsoina hoe biby lehibe indrindra maneran-tany aza izy io indraindray, dia misy taolam-biby zanaky ny vato harana an'arivony an'arivony Scleractinia. Ny fambolena biodiversité lehibe dia napetraka amin'ireo taolam-paty ireo.
Na izany aza, io fahagagana voajanahary io dia, sahala amin'ny maro hafa, tandindomin-doza noho ny fiakaran'ny hafanana sy ny fandotoana manerantany. Tandindomin-doza mihitsy aza izy io amin'ny alàlan'ny jono sy karazam-biby tsy voafehy toy ny trondro misy satroboninahitra misy tsilo, izay manimba ny vatohara.
Raha vita ny Haran-dranomasina Lehibe dia iray amin'ireo firavaka ekolojika amin'ny planeta. Fa, ankoatr'izay, ho simba ny tontolo iainana ny karazana sokatra an-dranomasina, trozona, feso, ary na dia ny voay aza. Ity farany dia biby hafakely an'ny fianakavian'ny Sirenid izay nijanona ho hany solontenan'ny karazan'izy ireo. Ary izany dia mitarika anay hiresaka aminao momba ny biby Australiana.
Sombim-batana amin'ny Haran-dranomasina lehibe
Ny tontolo iainana any Aostralia: biby
Raha mahavariana ny zavamaniry aostralianina dia tsy vitsy koa ny biby, izay manana karazana maro ihany koa tsy fahita hatraiza hatraiza. Efa nilaza taminay izahay fa saika sivifolo isanjaton'ny biby mampinono dia toy ny isan-jaton'ny trondro, amphibien ary biby mandady ihany. Fa ny zavatra tena mahaliana dia ity biby ity izay misy biby izay ao anatin'ireo mahaliana kokoa an'izao tontolo izao. Hiresaka momba ny sasany amin'izy ireo izahay.
Ny kangaroo sy ny marsupial hafa
Izy io angamba no malaza indrindra amin'ireo biby ireo, hatramin'ny nahatongavany ho iray amin'ireo tandindon'i Aostralia. Tsy eto no toerana anazavana fanazavana siantifika momba ny kangaro. Hofeperanay ny teninay milaza aminao fa an'ny fianakavian'ireo Macropodinae marsupial ary misy subspesies telo ao amin'ny firenena: ny kangaroo mena, ny volondavenona atsinanana ary ny volondavenona Andrefana.
Saingy tsy io irery no marsupial any Aostralia. Toy izany koa ny sariaka Koala, ny Wombat na ny amboadia tasmanianina. Saingy, eto amin'ity nosy ity dia biby tsy manam-paharoa: ny Devoly Tasmanianina, izay, na eo aza ny anarany mampatahotra, dia ny haben'ny alika kely ary manana volony mainty mainty. Angamba ny anarany dia noho ny fofona tsy mahafinaritra aterak'izany sy ny tomany manelingelina.
Ny dingo na amboadia aostralianina
Nipetraka tany amin'ny tanin'i Aostralia nandritra ny dimy arivo taona teo ho eo, miaraka amin'ny mpiavy voalohany, ny dingo dia heverina ho toy ny taranaky ny amboadia aziatika. Na izany aza, antsoina koa izy io Alika dia satria mizara toetra maro amin'ny canida anatiny izy io. Raha ny marina, raha ny filazan'ny teoria sasany, dia mety ho ilay teo alohany.
Rehefa tonga tany Aostralia ny eropeana voalohany dia niampita ny alikany niaraka tamin'ireo biby ireo izy ireo. Noho izany, atahorana ho lany tamingana ny dingo madio. Midika izany fa, amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, dia karazana voaaro izy io. Na izany aza, amin'ny hafa dia mbola hazaina izy io.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa karazany izy io mora kokoa ny mandoko kokoa noho ny amboadia eropeana. Noho io antony io, tany Aostralia dia nampiasaina ho biby fiompy izy ireo na dia ireo aborigine aza. Na izany aza, rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny mpivady (matetika indray mandeha isan-taona) dia mandositra matetika izy ireo.
Ny kangaroo, iray amin'ireo tandindon'ny tontolo iainana any Aostralia
Ny monotremes, ny platypus tsy mampino
Antsoina hoe monotremes, to biby mampinono oviparous, izany hoe atody aterak'izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia karazany dimy monja amin'izy ireo no notehirizina ary roa ny indizeny any Aostralia. Ny iray dia ny echidna, mitovy amin'ny hedgehog.
Fa ny mahaliana kokoa dia ny ornithorrinc, izay efa naheno tokoa ianao satria io dia iray amin'ireo zavaboary miavaka indrindra amin'ny fanjakan'ny biby. Tena liana tokoa izany, rehefa naseho ny hoditr'izy ireo tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia noheverin'izy ireo ho sangisangy azo zakaina izany.
Amin'ny ankapobeny, ny platypus dia toa gana, noho ny fofony, fa ny rambony dia mitovy amin'ny an'ny ombivavy ary ny tongony dia mitovy amin'ny an'ny otter. Toy ny hoe tsy ampy izany rehetra izany, ny lahy amin'ny karazany dia manana karazana mandroritra ny tongony aoriana izay mamoaka poizina. Tsy mahafaty olona izany, fa miteraka fanaintainana mafy. Ary, ho fanampin'izay, manana electroreceptors mahery izy ireo izay manampy azy ireo hahita ny hazany. Midika izany fa ny herinaratra vokarin'ny fihenan'ny hozany no ahitan'izy ireo azy ireo.
Tena liana tokoa ity biby ity fa, hatramin'ny nahitana azy, dia io no kendren'ny biolojia evolisiona. Amin'ny lafiny iray hafa dia tandindon'i Aostralia izy io. Izy io dia tandindon'i New South Wales ary hita eo amin'ny farantsakely roapolo cent.
Efa nilaza taminay ny momba ny dugong izahay, ka izao dia holazainay aminao hoe inona izany ny biby mampinono an-dranomasina tokana eto an-tany ary ny havana akaiky indrindra velona dia ny elefanta, izay liana te hahafantatra, satria ny voalohany dia nifanaraka tanteraka tamin'ny rano. Saingy, any amin'ny ranomasina aostralianina dia misy karazana fahalianana hafa.
Ilay iray ao anatin'ny tontolo iainana any Aostralia dia an'ny karazany crocodrylus porosus, ny lehibe indrindra eto an-tany. Ity colossus tena izy ity dia mety hahatratra fito metatra ny halavany sy lanjan'ny dimanjato sy arivo kilao. Noho io antony io dia mpiremby fatratra izay, isan-taona, dia mamono olona maro. Vondron'ireto biby ireto no voalaza fa novonoina ho miaramila Japoney an'arivony nibodo ny Nosy Ramree any Birmania tamin'ny taona 1945.
Ilay voay an-dranomasina mampatahotra
Ny fahalianana iray hafa an'i Oceania dia ity vorona lehibe tsy manidina ity. Raha ny marina dia izy no faharoa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao aorian'ny aotirisy. Raha mila angon-drakitra anecdotal bebe kokoa momba an'io karazana io ianao dia holazainay aminao izany maitso mainty ny atodin'izy ireo, tsy toy ireo nametraka zavaboary hafa amin'ny tontolo akoho amam-borona.
Ary farany, holazainay aminao ny bibilava manodidina ny tontolo aostralianina. Ity firenena ity no manana ny betsaka indrindra amin'izy ireo misy poizina eto amin'izao tontolo izao. Ny tena mampidi-doza dia bibilava tohatra y ny Tigra mikasika ireo terestrialy sy ireo ao amin'ny fianakaviana Hydrophiinae raha ny momba ny ranomasina.
Ho fehiny, ny tontolo iainana ao Aostralia izy io dia iray amin'ireo karazany indrindra eto an-tany. Noho izany dia manana karazany mahaliana toa an'ireo noresahintsika izy. Ary koa miaraka amin'ny androngo sy trondro maro karazana mampihorohoro toy ny antsantsa omby. Noho izany, raha mandeha any amin'ny firenena any amin'ny ranomasina ianao dia hahita biby tsy manam-paharoa eto ambonin'ny planeta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny tontolo iainana any Aostralia
Zend Caelus dia hoy izy:
Manasa antsika ny Tany Aostralianina hizaha azy io. Inona no andrasantsika? =)
Ny morontsiraka tsara indrindra any Atena
Ahoana ny fomba fitafy any Soisa?